Wasiirka Seychelles oo dhambaal sare u qaadaya Maalinta Dalxiiska Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Wasiirka Seychelles oo dhambaal sare u qaadaya Maalinta Dalxiiska Adduunka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Shirarka • News • Dadka • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Wasiirka Seychelles ee Maalinta Dalxiiska Adduunka
Maanta oo kale sanad walba, Seychelles waxay ku biirtaa 158 dal oo kale oo xubin ka ah Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) xuska Maalinta Dalxiiska Adduunka. Maalintani waxay iftiiminaysaa muhiimada safarka iyo warshadaha dalxiiska, iyo sidoo kale inay tahay maalin dabaaldeg iyo milicsiga. Mawduuceena “Qaabaynta mustaqbalkeena,” waxaan ku bogaadinaynaa dadkeenna iyo tabarucaadkooda.
Seychelles kasta, qayb kasta oo ka mid ah dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ee dalka waa inay ku lug yeeshaan geedi socodka kobaca loo dhan yahay.
Sababtoo ah COVID-19, sida dhammaan waddamada kale ee meeraha, Seychelles waxay la kulantay burburka ku dhow warshadaha dalxiiska.
Ummaddu waxay markiiba ogaatay in la qabsashada duruufaha is -beddelaya ay fure u tahay jiritaankeeda.
UNWTO ayaa u asteysay Maalinta Dalxiiska Adduunka ee 2021 inay tahay maalin diiradda lagu saarayo Dalxiiska Kobaca Loo Dhan Yahay. Kobcin loo dhan yahay ayaa ah waxa aan ku dadaaleyno annagoo raadinayna inaan ka soo kabanno saameynta masiibada. Waxaana lagu wadi doonaa dalxiiska. Waxay quseysaa qof kasta oo inaga mid ah, iyo Seychelles kasta, qayb kasta oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalkeenna waa inay ku lug yeeshaan geeddi -socodkan. Gaar ahaan “caadikan cusub”.
Isagoo ka hor imanaya burburkii ku dhowaa ee warshadahayaga, waxaan ogaanay in la qabsashada duruufaha is beddelaya ay fure u tahay badbaadadeena. Waxaan qaadnay khataro aad u weyn laakiin la xisaabiyey, oo isku xiraya soo kabashada dhaqaalaha iyo ilaalinta dadkayaga iyo caafimaadka iyo badbaadada martidayada iyada oo la bilaabay bilowgii 2021 ee barnaamij tallaal adag oo ballaaran oo ka dhan ah COVID-19, oo noo oggolaanaya inaan si geesinimo leh u furno dunida March. Waxaan hadda goosaneynaa faa'iidooyinka tallaabooyinkaas aan wada qaadannay.
Laakiin waa in aynaan, mana awoodin, in ay ahaato mid raalli ah. Keligeen kuma nihin la -qabsiga caadiga cusub. Tartamayaashayagu si isku mid ah ayay u yihiin kuwo dagaal badan oo hal -abuur leh ololahooda suuqgeynta dalxiiska. Iyada oo ay jirto tartan adag oo aan kala joogsi lahayn, waa inaan sii wadnaa bixinta qiimaha lacag. Waa inaan hubinnaa in hoyga iyo adeegyada aan bixinno ay yihiin kuwo halbeeg u ah, oo xitaa ka sarreeya wixii la aqbalay oo la filayay. Waa inaan diirada saarnaa bixinta heer aad u weyn oo ah khibradaha dalxiiska ee ku saleysan bulshada oo ka tarjumaya astaantayada. Sidoo kale, oo aan lahayn ahmiyad yar, waa inaan sii wadnaa tirtiridda dhammaan dhaqamada sharci -darrada ah iyo kuwa qarsoon ee wiiqaya warshadeena dalxiiska iyo martigelinta, oo sumcaddeena u keen sumcaddeena.
Maalinta Dalxiiska Adduunka, sidaa darteed waxaan ku baaqayaa midnimo, midnimo gudaha waaxda dalxiiska. Sababtoo ah, marka laga soo tago tirakoobka, waxaan ognahay in gadaal kasta oo ku saabsan warshadan, uu jiro hawlwadeen, waxaa jira haween iyo rag. Markaa si aan warshadeena dalxiiska kor ugu qaadno heerar sare oo aan uga gudubno caqabadaha hortaagan, annaga oo aan cidna u kala eexan, waa inaan ku biirnaa xoogagga. Iyagoo dhammaan wadaagaya aragti isku mid ah iyo rabitaan isku mid ah arag dalxiiska oo barwaaqooba, annagoo si gaar ah u wada shaqeyneyna, waxaan u soo bixi doonnaa guul. Waxaa jira shaki yar.
Adiga oo aad u qushuucsan dadaalkaaga iyo xamaasaddaada, waxaan kaaga mahadcelineynaa inaad qalbigaaga gelisay warshadeena dalxiiska.
Maanta waan ku xusaynaa. Maalinta Dalxiiska Adduunka oo Farxad leh!